Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa Hagayya 23 bara 2012 akka gaggeefamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaan Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa Hagayya 23 bara 2012 akka tahu Boordiin Filannoo Biyyaalessaa konfiransii har'a magaalaa Finfinneetti qooda fudhattoota waliin gaggeeffamaa jirurratti dhiyeesse.
Murtoon kun kan xumuraa tahuu ibsamuu baatus, konfiransii taa'amaa jiru irratti boordiin filannoo dhiyeesseera.
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa guyyaa sagaleen kennamu kanaan dura Hagayya 10 akka tahu yaada dhiyeesse ture fooyyeessee dhiyeessuun gaafa Hagayya 23 bara 2012 akka tahu hirmaattota mariif dhiyeesseera.
Filannoo bara kanaa ilaalchisee qooda fudhattoota garaagaraa waliin konfiransiin gaggeeffamaa jira. Konfiransicharratti hogganaan Komishinii Mirga Namoomaa, hoggantootni paartilee mormitootaa fi qooda fudhattootni kaanis argamaniiru.
FBC'n akka gabaasetti, konfiransicha irratti walitti qabdun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aadde Burtukaan Miidhaksaa guyyaa filannoo ilaalchisee gaaffiiwwan hedduun ka'anis ilaalcha keessa galfamanis bu'uura seeraan garuu guyyichi hagayya 23 tahuu qaba jedhaniiru.
'Bordiin Filannoo taphaan ala nu taasisuu barbaada'
Yeroo gannaa filannichi gaggeeffamuu waliin wal qabatee Ejensii Meetiroloojii Biyyaalessaa waliin hojjenna jedhaniiru.
Guyyaa filannoo kanaan dura Hagayya 10 haa tahu jedhamee dhiyaate irrattis paartileen mormitootaa garaagaraa mormi akka qaban ibsaa turaniiru.
Gama biraan ammoo paartileen akka ABO filannicha dursee miseensotnii fi deeggartootni keenya bakka garaagaraatti hidhamaa jiraachuun yaaddoo nutti uumeera jedhan.
Filannoo Biyyoolessaa: 'Bordiin Filannoo taphaan ala nu taasisuu barbaada'
'Dhimmi Naannoo Tigraay hunda keenya yaachisuu qaba'- UN
18 Ebla 2021
Ji'a Ramadaanaa keessa muslimoonni talaallii Covid-19 fudhachuu danda'uu?
Iraan eenyummaa nama buufata niwukilaraa ishee haleelee adda baasuu ibsite
Dubartiin Ruwaandaa duguggaa sanyiin himatamte US irraa biyyatti deebifamte.
Namoonni dhugaatii burtukaanii guyyaan itti darbe dhugan hedduun lubbuu dhaban